GroupHigh: Fikarohana sy fanaraha-maso ny fanentanana ny bilaoginao | Martech Zone
Alatsinainy Desambra 3, 2018 Sabotsy, Desambra 8, 2018 Douglas Karr
mpiara-miasa Nanoratra i Chris Abraham momba ny vahaolana amin'ny fanentanana bilaogera antsoina hoe GroupHigh. GroupHighNy sehatra an-tserasera dia manome ny singa rehetra ilainao hatao amin'ny fanentanana ny bilaogera.
Ny GroupHigh dia ahafahanao mahita bilaogera mora foana amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fikarohana sy ny sivana amin'ny bilaogy amin'ny fotoana tena izy. Ny angon-drakitra dia misy ny lohahevitra, ny toerana misy azy, ny fampahalalana bilaogy, ny kaonty sosialy, ny angona mpankafy sy ny mpanaraka, ny fahefana fikarohana biolojika (avy amin'ny Moz) ary ny statistikan'ny fifamoivoizana avy amin'ny Compete.com sy Alexa. Ny sehatra dia ahafahan'ny mpampiasa mahita, manara-maso ary manome ny bilaogy amin'ny fampielezan-kevitra mihitsy aza. Azonao atao koa ny mamorona lisitra bilaogera amin'ny fanafarana URL avy amin'ny takelaka.
Ny fampidirana ny fifamoivoizana dia misy ny mpitsidika isam-bolana ny bilaogy, ny pejy ary ny pejy isaky ny mitsidika. Ho hitanao ihany koa ny refy momba ny firosoana ara-tsosialy ao amin'ny Twitter, Facebook, Youtube, Google+, LinkedIn, Pinterest, ary Instagram ary koa ny fiantraikan'ny bilaogera ao amin'ny fantsona media sosialy tsirairay.
Ny singa fitantanana ny fifandraisan'ny GroupHigh dia manamora ny famoronana fifandraisana vaovao, fitazonana ireo efa misy anao, fanarahana ireo fifandraisana ireo ary fiaraha-miasa amin'ny ekipa amin'ny ezaka ataonao:
Fanarahana ny mailaka - Jereo rehefa nifandray tamin'ny bilaogeranao farany ianao.
Mifandraisa firaketana - Ataovy personalize ny fifandraisanao amin'ny fitehirizana ny mombamomba anao amin'ny fifandraisana amin'ireo bilaogera anao.
Fiaraha-miasa amin'ny mpampiasa maro - Jereo sy alamino ny tantaran'ny hetsika manerana ny ekipanao na departemanta maro.
Fampahatsiahivana fanarahana - Mifandraisa matetika amin'ireo mpitoraka bilaogy anao ary araho ity fifanakalozana ity.
Manendry bilaogera - Miasa amin'ny ekipa? Manendre bilaogera amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa iray mba hamoronana fifandraisana iray ary hanafoanana ny mety hisian'ny olona marobe manangana ilay bilaogera iray ihany.
Jereo sy tadiavo ireo lahatsoratra vao haingana nataon'ny bilaogy nefa tsy ilaozanao ny fampiharana GroupHigh. Bookmark Target Post mba hahafahanao mijery lahatsoratra manokana rehefa tonga ny fotoana hamoahana azy. Fantaro ny fomba niarahan'ny bilaogy niasa tamina programa momba ny varotra taloha tamin'ny fijerena raha nandefa lahatsoratra vahiny izy ireo na nandray anjara tamin'ny famerenana vokatra na fanomezana. Azonao atao ihany koa ny mametaka bilaogy sy lahatsoratra na aiza na aiza ao anatin'ny iray amin'ireo lisitra GroupHigh anao.
Anisan'ireo fanavaozana farany:
Ny fahaizan'ny fikarohana amin'ny fomba mahery vaika amin'ny influencer, bilaogera ary haino aman-jery an-tapitrisany.
Backlink Discovery amin'ny lahatsoratra rehetra
Fikarohana atiny amin'ny lahatsoratra 80 tapitrisa
Fanafarana lisitra url ho an'ny fikarohana eo noho eo
Fanivanana ny toerana
Fifandraisana amin'ny Instagram, Youtube ary Twitter
Mihoatra ny 45 metatra haseho sy sivana amin'ny lisitra
Sivanina amin'ny karazana haino aman-jery 24 mahery
Fanamafisana matanjaka kokoa sy fampahalalana momba ny fifandraisana amin'ireo firaketana rehetra
Fepetram-pandraisana anjara, fanarahana ary fitaterana
Fandaharana manerantany amin'ny fiteny 26
Tags: ny mpitoraka bilaogychris abrahammitadiava bilaogeramahita ny influencersgrouphighInfluencersfanentanana